Xidiga Thiago Silva Oo Doonaya Inuu Ku Biiro Chelsea Xagaagan. – Xidigaha
Kabtanka Paris Saint-Germain Thiago Silva ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu ku biiro kooxda Chelsea xagaagan.
35 jirka ayaa qarka u saaran inuu xor noqdo ka dib finalka Champions League, warbixin dhowaan soo baxday ayaa sheegeysa in kooxda Frank Lampard inay ka fiirsaneyso inay u dhaqaaqdo daafaca halyeeyga ah.
Fiorentina ayaa sidoo kale loo qiimeeyay inay xiiseynayaan xiddiga reer Brazil, laakiin sida laga soo xigtay Telefoot Chaine , Silva wuxuu doonayaa inuu u dhaqaaqo Stamford Bridge kahor ololaha 2020-21.
Xiddiga reer South America ayaan go’aan ka gaari doonin mustaqbalkiisa ka hor isbuuca soo socda madaama uu hogaaminayo PSG kulanka axada ee finalka European Cup oo ay la ciyaarayaan kooxda heysata Jarmalka ee Bayern Munich.
Chelsea ayaa la filayaa inay suuqa kasoo qaadato ugu yaraan hal daafac dhexe ka ciyaaraan xagaagan sababtoo ah waxa ay ku dhibtoodeen dhinacaas intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2019-20.
Silva ayaa ku guuleystay 7 horyaal oo Ligue 1 ah tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda AC Milan bishii July ee sanadkii 2012.
Be the first to comment on "Xidiga Thiago Silva Oo Doonaya Inuu Ku Biiro Chelsea Xagaagan."